Sebenzisa i-DMP kunikela ngezendlalelo zedatha ezengeziwe zabakhangisi, ngenkathi kukhulisa ikhwalithi ne-CPM kokuvelile okuhlinzekiwe. Idatha igolide elisha. Ake sicabangele isici esiyinhloko sokuhlela idatha yabashicileli nokukhetha umhlinzeki wezobuchwepheshe ongalingana nezidingo zebhizinisi zezinhlobo ezahlukene zabashicileli.
I-DMP akufanele iphazamise izinqubo zakho futhi idinga ukusebenza ngokuzungeza ingqalasizinda yezobuchwepheshe ekhona. Isibonelo, uma usuvele unayo ipulatifomu ye-CRM, i-CMS, nokuhlanganiswa nabalingani obafunayo, i-DMP ekhethiwe kufanele ihambisane nabo bonke.